Axmed Madoobe oo qaaddacay shirka - BBC Somali - Warar
Axmed Madoobe oo qaaddacay shirka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 12 June, 2013, 16:21 GMT 19:21 SGA
Maammulka Axmed Madoobe ayaa sheegay in uu qaaddacay shirka looga hadlayo Jubbooyinka ee dowladdu ay ku dhawaaqday
Maammulka Axmed Madoobe ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in uu qaaddacay shirka ay dowladda ku dhawaaqday ee la doonayo in looga hadlo arrimaha gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Afhayeenka Maamulkan, Cabdinaasir Seeraar, ayaa sheegay in uu tegi doono shirkaas oo keliya haddii dowladdu ay aqoonsato maammulkooda.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr maalmood ka hor ku dhawaaqay in uu qaban doono shir la doonayo in lagu xalliyo khilaafka Kismaayo.
Magaalada Kismaayo waxaa ku sugan ciidammada Kenya oo hoos tego xoogagga Afrikaanka ee ka holwgalo Soomaaliya.
Kenya ayaa horey loogu eedeeyay inay taageerto dhinac ka midh ah dhinacyada ku loollamaya Kismaayo.
Ugu yaraan sideed ruux ayaa ku dhimatay dagaallo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kismaayo oo u dhexeeyay dhinacyada ku hardamaya magaalada.